| Mutambo Wokushanyira: 144
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekuenda Kubva ku Kovalam uye kutarisa kuIndaneti. Ita zvinonakidza muKovalam beach. Kuvaraidza manheru. Usiku huno huripo kuKOVALAM.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kubva Kanyakumari (80 kms. / 2 Hrs.). Enroute kushanyira Padmanabhapuram Palace uye Kudhindwa kuIndaneti. Nharaunda inoshanyira Gandhi Mandapam, Vivekananda Memorial uye inonakidzwa nokuvira kwezuva manheru. Usiku huno huripo paKANYAKUMARI.
Mangwanani Ekutanga mangwanani anofarira zuva richibuda. Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kubva kuTurvandrum (95 kms. / 2.5 Hrs.) Tumira kuItele. Nharaunda inoshanyira Sri Padmanabha Swamy Temple, Napier Museum uye Zoo. Usiku huno huripo pa TRIVANDRUM.